माघ १३, काठमाडौं । एनआइसी एशिया ब्यालेन्स फण्ड र एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्डले पुस मसान्तको वित्तीय विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरेका छन् ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार दुवै योजनाको नाफा मंसिर मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा वृद्धि भएको हो । एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डले पुस मसान्तसम्ममा रू. ४० करोड ६९ लाख ६० हजार कमाएको छ । फण्डले मंसिर मसान्तमा रू. ३१ करोड ५३ लाख २७ हजार नाफा कमाएको थियो ।
त्यस्तै, एनआइसी एशिया ब्यालेन्स फण्डले मंसिर मसान्तमा रू. २२ करोड ५८ लाख ४२ हजार नाफा कमाएकोमा पुस मसान्तमा वृद्धि भएर रू. २९करोड १३ लाख ८६ हजार पुगेको छ । यी दुवै योजनाको नाफासँगै एनएभीमा पनि वृद्धि भएको छ ।
एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्डको प्रतिइकाई खुद मूल्य (एनएभी) पुस मसान्तसम्ममा रू. १३ दशमलव ८८ पुगेको हो । यो मूल्य मंसिर मसान्तमा रू. १३ दशमलव ०४ थियो । त्यसैगरी एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको एनएभी मंसिर मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा रू. १ दशमलव ११ ले वृद्धि भएको छ ।
योजनको मंसिर मसान्तसम्ममा एनएभी रू. १३ दशमलव ७९ रहेकोमा पुस मसान्तमा वृद्धि भएर रू. १४ दशमलव ९ पुगेको हो । यस योजनाले पुस मसान्त सम्ममा सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीको लागत मूल्य रू. ६२ करोड ७१ लाख ४९ हजार रहेकोमा यसको बजार मूल्य रू. ९७ करोड ३३ लाख १४ हजार पुगेको हो ।
त्यसैगरी, एनआइसी एशिया ब्यालेन्स फण्डले पुस मसान्तसम्ममा सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीको लागत मूल्य रू. ५३ करोड १ लाख ७९ हजार रहेकोमा यसको बजार मूल्य रू. ७८ करोड ९३ लाख ७३ हजार पुगेको छ ।
यी दुवै योजनाको लगानीको लागत मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी रहेको छ । पछिल्लो समय शेयर बजार बढेसँगै यी दुवै योजनाले लगानी गरेका कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएसँगै नाफा र एनएभीमा वृद्धि भएको हो ।